Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Gaadiidka » Heerarka Taxi ee Madaarka Yurub ee ugu fiican ayaa ku taxan € 5 ilaa € 119
Airport • Jebinta Wararka Caalamka • kirada baabuurka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka UK
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Yurub ayaa soo kabanaya. Waxaa jira dalab sii kordhaya oo ah tigidhada diyaaradaha, hoyga, gaadiidka, iyo waxqabadyada marka la barbardhigo 2020. Kobaca tirada ballansashada tagaasida taga iyo ka soo degista garoomada diyaaradaha ee Yurub ayaa taagan.
Qiimaha sare ee baabuurta kirada ah iyo maqnaanshaha gaar ahaaneed ee gaadiidka dadweynaha waa sababo muuqda.
Warbixinta Taxi -ga Madaarka Xagaaga 2021 'Qiimaha tagsiga ee garoomada diyaaradaha Yurub' ayaa isbarbar dhiga qiimaha taksiyada 50 garoon ee ugu mashquulka badan Yurub.
Sababtoo ah warbixintu waxay siisaa dadka safarka ah aragti ku saabsan qiimaha celcelis ahaan raacitaanka taksiga garoonka diyaaradaha ee bartamaha magaalada, qiimayaasha tagaasida horay loo sii ballansaday kuma jiraan isbarbar dhigga.
Baabuurta kirada ah oo aad qaali u ah oo ku salaysan hadallada socdaalayaasha soo noqnoqda.
Qiimaha tagaasida ayaa ku taxan madaarka ilaa badhtamaha magaalada
Bixiyeyaasha baabuurta kirada ah, 2020 wuxuu ahaa sanad musiibo ah. Sababtoo ah ma jirin wax alaab -qeybiyeyaasha dalabka ah lagu qasbay inay iibiyaan qeyb weyn oo ka mid ah maraakiibtooda. Hadda sannad kadib, tani waxay keenaysaa dhibaatooyin, maxaa yeelay baahida ayaa ka badan sahayda. Intaa waxaa dheer, waxaa jira baabuur yar oo cusub oo suuqa ku jira sababtuna tahay yaraanta chip -ka adduunka. Sababtoo ah yaraanta baabuurta kirada ah, kiraynta baabuur ayaa aad uga qaalisan sidii caadiga ahayd maalmahan.
Gaadiidka dadweynaha aad buu u badan yahay
In kasta oo arrimuhu si tartiib tartiib ah ugu socdaan jihada saxda ah ee Yurub, haddana dadka qaar ayaa weli ka labalabeeya inay u guuraan kooxo waaweyn ama inay u dhowaadaan dadka kale. Gaadiidka dadwaynuhu wuxuu abuuri karaa dareen aan ammaan ahayn sidaas darteedna waxaa weli ka fogaada socdaalayaasha qaarkood. Raacidda taksi waa ka qaalisan tahay raacitaanka gaadiidka dadweynaha, si kastaba ha ahaatee (dareenka) nabadgelyadu waxay ka badisaa kharashyada in ka badan intii hore.
Tagaasida ayaa caan ku ah garoomada diyaaradaha ee Yurub
Tirooyinka ayaa iska hadlaya sida uu sheegayo Guus Wantia, oo ah milkiilaha AirMundo, oo ah shirkadda samaysay baaritaanka.
Shirkadaha tagaasida, dalabka sii kordhaya ee dalxiisayaasha iyo dadka socotada ah ayaa yimaada waqtiga ku habboon, maaddaama ay qayb ahaan ka kaaftoomayaan safarro ganacsi.
Waa imisa taksi laga bilaabo garoonka diyaaradaha ilaa magaalada?
Qiimayaasha Yurub ayaa ka socda € 112 gegida diyaaradaha ee Stansted London ilaa 5 ee Antalya, Turkey.
Qiimaha tagaasida 50 -ka diyaaradood ee ugu mashquulka badan Yurub Airport Country Lacagta tagsiga KM / Miles Qiimaha halkii KM
1 Madaarka London Stansted UK € 112 (95 GBP) 63 / 39.1 € 1.78
2 Madaarka London Luton UK € 106 (90 GBP) 55 / 34.2 € 1.93
3 Gegada diyaaradaha ee Milan Bergamo Italy € 105 52 / 32.3 € 2.02
4 Madaarka London Gatwick UK € 100 (85 GBP) 47 / 29.2 € 2.13
5 Madaarka Milan Malpensa Italy € 95 50 / 31.1 € 1.90
6 Madaarka London Heathrow UK € 82 (70 GBP) 27 / 16.8 € 3.04
7 Madaarka Oslo Norway € 77 (800 NOK) 50 / 31.1 € 1.54
8 Madaarka Munich Germany € 75 38 / 23.6 € 1.97
10 Madaarka Stockholm Arlanda Iswidhan € 56 (575 SEK) 42 / 26.1 € 1.33
12 Madaarka Berlin Brandenburg Germany € 53 27 / 16.8 € 1.96
13 Madaarka Rome Fiumicino Italy € 50 30 / 18.6 € 1.67
14 Madaarka Zurich Switzerland € 47 (50 CHF) 12 / 7.5 € 3.92
15 Madaarka Brussels Belgium € 45 15 / 9.3 € 3.00
16 Gegada diyaaradaha ee Helsinki Finland € 45 20 / 12.4 € 2.25
17 Madaarka Kobanheegan Denmark € 40 (300 DKK) 10 / 6.2 € 4.00
18 Madaarka Geneva Switzerland € 37 (40 CHF) 6 / 3.7 € 6.17
19 Garoonka Diyaaradaha Paris Orly France € 37 18 / 11.2 € 2.06
20 Gegada diyaaradaha Vienna Austria € 36 20 / 12.4 € 1.80
21 Madaarka Edinburgh UK € 35 (30 GBP) 13 / 8.1 € 2.69
22 Madaarka Manchester UK € 35 (30 GBP) 14 / 8.7 € 2.50
23 Madaarka Barcelona Spain € 35 15 / 9.3 € 2.33
24 Madaarka Athens Greece € 35 34 / 21.1 € 1.03
25 Madaarka Frankfurt Germany € 33 12 / 7.5 € 2.75
26 Madaarka Nice France € 32 7 / 4.3 € 4.57
27 Madaarka Stuttgart Germany € 32 13 / 8.1 € 2.46
28 Madaarka Hamburg Germany € 30 11 / 6.8 € 2.73
29 Madaarka Barajas ee Madrid Spain € 30 17 / 10.6 € 1.76
30 Madaarka Grana Canaria Spain € 30 21 / 13 € 1.43
31 Gegada diyaaradaha ee Düsseldorf Germany € 28 9 / 5.6 € 3.11
32 Madaarka Dublin Ireland € 27 12 / 7.5 € 2,25
34 Garoonka Diyaaradaha ee Porto Portugal € 25 16 / 9.9 € 1.56
35 Madaarka Istanbul Turkey € 25 (250 isku day) 50 / 31.1 € 0.50
36 Istanbul Sabiha Gökcen Air. Turkey € 25 (250 isku day) 50 / 31.1 € 0.50
37 Madaarka Prague Czech Rep. € 24 (600 CZK) 16 / 9.9 € 1.50
38 Madaarka Malaga Spain € 23 10 / 6.2 € 2.30
40 Madaarka Alicante Spain € 22 11 / 6.8 € 2.00
41 Madaarka Budapest Hungary € 21 (7300 HUF) 22 / 13.7 € 0.95
42 Madaarka Palma de Mallorca Spain € 20 10 / 6.2 € 2.00
43 Garoonka diyaaradaha ee Moscow Vnukovo Russia € 20 (1700 RUB) 30 / 18.6 € 0.67